Faah Faahin: Is qarxintii Xerada ciidan ee Warshadii Nacnaca iyo Al-Shabaab oo sheegtay
Faah faahin ayaa ka soo baxaya weerar is qarxin ah oo maanta barqadii ka dhacay Warshadii nacnaca oo ku taal degmada Wadajir, halkaasoo ah xero ciidan oo ay leeyihiin Ciidamada Milateriga Soomaaliya
Mid ka mid ah macalimiinta Muqdisho oo ku dhintey qarax gaarigiisa loogu xirey
Mid kamid ah macalimiinta wax ka dhigta iskuulada ku yaal magaalada Muqdisho ayaa ku dhintey qarax loogu xirey gaarigiisa xilli uu shaqo tegeyay saaka degmada Dharkeynley.
In ka badan 50 ruux oo ku geeriyootay qarax xoogan oo ka dhacay Suuq ku yaalla Baqdaad
In ka badan 50-ruux ayaa ku geeriyootay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari kuwa xamuulka ah oo saaka waabarigii hore ka dhacay waqooyi bari magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq.
Gaari waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen oo ku qarxay agagaarka Isgoyska Al-Baraka ee degmada Hodan
Gaari ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa ayaa abaarihii maqribkii ku qarxay agagaarka Isgoyska Al-Baraka ee degmada Hodan, iyadoo qaraxa ka hor is rasaaseyn ay dhex martay ciidamo ka tirsan Booliska oo ku sugnaa jidka Sodonka iyo labo ruux oo gaariga wadatay.
Qarax Qasaare Dhimasho dhaliyay oo Saakay ka dhacay Magaalada Muqdisho
Gaari nuuca Raaxada ah oo lagu soo xiray Waxyaabaha qarxa ayaa saakay ku qarxay agagaarka Isgooska Taraboonka ee Magaalada Muqdisho , waxaana qaraxaasi ka dhashay qasaaro dhimasho.
Faafaahintii ugu danbeeysay Qarax Ismiidaamin ah oo Fiidnimadii xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo Al-shabaab oo sheegay Mas'uuliyaddiisa
Fiidnimadii Xalay ayaa wuxuu qarax weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay kasoo horjeedka Ex-fiyoore, iyadoo qaraxu uu haleelay baar halkaa ku taalla, waxaana mas'uuliyadda qaraxan sheegatay Al-shabaab.
Qarax lagu Dilay Nabadoon Caan ka ahaa Gobolka Hiiraan iyo Warar dheeraad ah oo kasoo baxaayo qaabka uu u dhacay Qaraxa
Warka ka imaanaya Gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in Gaari uu lahaa Nabadoon Axmed Cabdi Caalin oo Caan ka ahaa Gobolkaasi lagu dilay Qarax loogu xiray Gaarigiisa.
Qarax ka dhacay muqdisho oo geystay khasaare hantiyadeed oo aad u baahsan
Wararkii Ugu Dambeeyay Qarax Haween badan ku dhinteen oo ka dhacay Muqdisho(Daawo Sawirada)
Waxaa Saakay Qarax Miino ay ku dhinteen Haween ka shaqeenayay ololaha Nadaafada Gobolka Baaadir uu ka dhacay Xaafada Taleex gaar ahaan agagaarka Carwadii hore ee Degmada Hodan.
Qarax goordhaw ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo Faah faahin laga helayo cida lala eegtay
Waxaa goordhaw qarax xoogan oo lagu dilay Sargaal katirsanaa Ciidanka Militariga Dowlada Soomaaliya uu ka dhacay Agagaarka Isgooska Tirabuunka ee Magaalada Muqdisho.
Faahfaahin ku saabsan Qarax Ismiidaamin ah oo lagu Weeraray Baarlamaanka
Ugu yaraan shan qof oo laba ka mid ah ay ahaayeen ciidan ilaalo ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar is-miidaamin ahaa oo lagu qaaday xarunta baarlaamanka Soomaaliya, iyadoo ay ku dhaawacmeen 11-qof oo kale.
Qarax lala beegsaday Gudoomiye K/xigeenka Siyaasada & Amaanka D/Heliwaa
Qarax la sheegay nuuciisu inuu ahaa Bambaanada Gacanta laga tuuro ee F1-ta ayaa waxa maanta barqadii lala eegtay Gaari uu watay Gudoomiye kuxigeenka dhinaca Siyaasada iyo Amaanka ee Maamulka Degmada Heliwaa Abshir Kaaraan.
Qarax ka dhacay degmada Xamar Weyne oo Xildhibaan ku geeriyooday midna ku dhaawacmay
Wararka naga soo gaaraya degmada Xamar Weyne ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in qarax miino oo lagu xiray gaari nuuca ZUZUKAHA loo yaqaan lala eegtay Xildhibaano katirsan baarlamaanka Somalia.
Qarax manta Muqdisho lagula eegtay AMISOM
Qaraxyo miino ayaa maanta si kala gaar gaar ah waxaa lagula beegsaday ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, degmooyinka Yaaqshiid iyo Huriwaa, iyadoo la soo sheegayo in qaraxyadaas ay sababeen dhimasho iyo dhaawac.
Qarax kale oo ka dhacay isla goobtii uu ka dhacay kii hore iyo xalada Muqdisho oo kacsan
Qaraxyo Xoogan oo is xig xiga ayaa waxa ay ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada soomaaliya waxa ayna u muuqanayaan kuwa si qorsheeysan loo soo abaabulay
Faah faahin ka soo baxeysa weerarka is qarxinta ka dhacay agagaarka Garoonka diyaaradaha Muqdisho
Faah faahin kooban ayaa ka soo baxeysa weerar is qarxin ah oo lala eegtay Baabuur Qaramada Midoobey leedahay oo marayay meel ku dhow ilinka hore ee laga garo garoonka diyaaradaha Muqdisho, iyadoo qaraxan uu saameyn ku yeeshay habsami u socodkii howlaha garoonka.
DEG DEG: Weerar is qarxin oo lala eegtay gaari UN-ka leeyahay oo marayay agagaarka Air Porka Muqdisho
News Report • February 13, 2014
Qarax xoogan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa goor dhow ka dhacay nawaaxiga Garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan.
Qarax muqdisho ka dhacay laguna dhaawacay Gudoomiye.
Wararka naga soo gaaraya nawaaxiga Daarta Trepiano ee wadada Maka Al-Mukarama Magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax aan wax qasaara ah ka soo gaarin dad ka shacabka ah ee halkaasi ka agdhawaa.
Mas'uul ka tirsan dowladda oo ku dhintay qarax gaarigiisa loogu xiray oo ka dhacay Mudisho
Mas'uul ka tirsan dowladda ayaa ku dhintay qarax gaarigiisa loogu xiray oo ku qarxay nawaaxiga Isgoyska Tarbuunka ee degmada Hodan.
Weeraro qal-qal giliyay xaalada amaan oo xalay ka dhacay Muqdisho.
Tirada weerara ah ayaa waxa ay xalay ka dhaceen magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya iyada oo qal qal dhanka amaanka ah laga dareemay magaalada.
Nin hore uga tirsanaa nabad-sugidda oo isku qarxiyay nawaaxiga madaxtooyada
Sagal Radio Services • News Report • January 29, 2013
Laba ruux oo uu ku jiro nin isa soo miidaamiyay, ayaa ku dhintay maanta meel u dhow xarrunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee Muqdisho maanta, ka dib markii uu isku qarxiyay ruux isa soo miidaamiyay.
Qarax ka dhaxay xalay xerada Dhagaxlay oo dhimasho iyo dhaawac sababay
Sagal Radio Services • News Report • January 5, 2013
Laba ruux, ayaa ku dhimatay shan kalena way ku dhaawacmeen, kadib markii xalay bambo lagu tuurey goob lagu shaaho oo ku taalla xerada Dhagaxley ee dalka Kenya.
Qarixii Maka Al-mukarrama oo AMISOM ay cambaareysay
Ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM, ayaa cambaareyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay waddada Maka Almukarrama ee Muqdisho, kaas oo uu ku dhintay hal ruux ayna ku dhaawacmeen toddobo kale.